Orinasa mpamatsy hafanana ara-barotra, mpamatsy - mpamokatra paompy hafanana ara-barotra avo lenta
Heater rano amin'ny masoandro
Flat plate plate heater amin'ny rano
Paompy hafanana ara-barotra
Fantsona hafanana 3-50HP
Rafitra hafanana hafanana
Paompy hafanana ao an-trano
1-2.5HP Paompy hafanana
Paompy hafanana amin'ny dobo filomanosana
Paompy hafanan'ny mari-pana ambany
Solar Thermal Hybrid Heat Pump
Tetikasa Solar Thermal Hybrid Heat Pump Pump Hot Water System
Fanamainana hafanana hafanana avy amin'ny masoandro any an-trano
Chiller rano indostrialy
Kitapo fitehirizana rano mafana amin'ny masoandro
Varotra amidy mafana
Split hafanana Pump Pump Heater ho an'ny trano
Mpanangona solosaina fisaka 2 m² ara-toekarena ho an'ny masoandro ...
Hatramin'ny 90% Mamonjy angovo hafanana Solar Hybrid paompy mafana W ...
25-50 HP Pump Pump Heat Heat
Fanaraha-maso Heater Controller mandeha ho azy
Mizara roa heater-drano an'ny masoandro amin'ny alàlan'ny takelaka fisaka ...
300L Solar Water Heater miaraka amin'ny plate plate collector ...
80 Gallon Solar Geyser miaraka amin'ny Flat Plate Collector ho ...
Vacuum Tube Solar Collector Hybrid Heat Pump Pump H ...
Solar Thermal Hybrid Heat Pump momba ny rano mafana ho an'ny ...
Solar Thermal Hybrid Heat Pump System ho an'ny sekoly
Solar heat hybrid heat pump system fanafanana rano ...
Kitapo hafanana sy fampangatsiahana rano ho an'ny rano mafana sy ...
Chiller indostrialy avo lenta
Heater tsara indrindra amin'ny rano avy amin'ny masoandro 150 -300 litera
50 fantsona fantsom-pifandraisana fantsom-boalavo Solar Kit Vertical Mo ...
Rafitra fanamafisana ny rano amin'ny loharano misy loharano anaty rano iray
Rafitra fanamafisam-peo afovoany feno feno ao anaty fototra system SolarShine rehetra-amin'ny-iray loharano fanamafisam-peo hafanana rafitra rafitra rano mafana mifamatotra tanteraka. Ny singa ilaina rehetra dia napetraka ary napetraka amin'ny fototra avo lenta mialoha. Izy io dia manana tombony amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha, fametrahana mora, fitsitsiana fotoana ary fitehirizana asa.
Paompy hafanana azo avy amin'ny rivotra ho an'ny rafitra fanamainana rano mafana ao amin'ny orinasa
SolarShine dia mamatsy paompy hafanana varotra feno ho an'ny safidinao miaraka amin'ny 3Hp ka hatramin'ny 30Hp, ny herin'ny fidirana dia avy amin'ny 2.8kw ka hatramin'ny 26kw, afaka manome fahafaham-po ny rafitra fanamainana rano mafana amin'ny orinasa.
Pump Pump Heat Source ho an'ny rafitra fanamafisana rano mafana amin'ny Hotely
SolarShine dia mamatsy paompy hafanana varotra feno ho an'ny rafitra rano mafana amin'ny hotely misy anao manomboka amin'ny 3Hp ka hatramin'ny 30Hp, ny herin'ny fidirana dia avy amin'ny 2.8kw ka hatramin'ny 26kw, azonao atao ny misafidy modely mety indrindra ho an'ny hotelyo.
Loharanom-pamokarana hafanana ho an'ny rafitra hafanana ao an-tsekoly
Miaraka amin'ny fanatsarana ny fitsitsiana fitehirizana angovo sy ny karbaona ambany, ny sekoly dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fananganana ny rafitry ny rano mafana ao amin'ny campus. Ny fampiononana amin'ny fampiasana rano mafana, fitsitsiana angovo ary tombony amin'ny karbaona ambany amin'ny fitaovan'ny rano mafana dia lasa torolàlana roa hentitra amin'ny rafitry ny rano mafana ao amin'ny campus. Amin'ity toe-javatra ity, ny paompy hafanana no lasa safidy voalohany amin'ny rafitry ny rano mafana any an-tsekoly. Amin'izao fotoana izao dia sekoly maro no mampiasa paompy hafanan'ny angovo rivotra.
Paompy hafanana avo lenta mahomby ho an'ny rafitra rano mafana afovoany
Solarshine's Loharanon-drivotra Paompy hafanana Afovoany water fanafanana rafitra mitambatrad miaraka amina paompy hafanana avo lenta, loharano fitehirizana rano mafana, paompy sy kojakoja fanampiana toy ny fantsona, valves sns Mety amin'ny karazana tetikasa fanamafisana rano be afovoany, toy ny efitrano fandraisam-bahiny, efitranon'ny sekoly, efitrano fatoriana sy hopitaly sns. .
Fisarahana ny rafitra fantsona hafanana rano azo avy amin'ny rivotra
SolarShin's fisarahana cara-barotra a, ir shisce hmihinana pump wAtera hmihinana systems dia famolavolanaedisiona fna ireo orinasa sy andrim-panjakana mila rano mafana be, toy ny hotely lehibe, efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny mpianatra / ozinina, hopitaly, salona hatsaran-tarehy, dobo filomanosana zaza sns.
Vovonan'ny paompy hafanana 5 HP ho an'ny tetik'asa fanafanana rano mafana afovoany
SolarShine 5 HP Commercial Heat Pump Unit dia mety amin'ny tetik'asa fanamainana rano mafana afovoany na afovoany, manana paompy hafanana hafanana feno rivotra izahay: 1-2.5HP ho an'ny heater rano mafana ao an-trano, 3-30HP ho an'ny tetikasa fanamainana rano mafana.
10 HP Unit pamokafana hafanana indostrialy ho an'ny tetik'asa fanafanana rano mafana afovoany
SolarShine 90000BTU 10 HP Industrial Heat Pump Unit dia natao ho an'ny tetik'asa fanamainana rano mafana afovoany, izay afaka manampy ny mpampiasa hitahiry vola be.
Fitaovana paompy hafanana 12 HP ho an'ny rafitra fanafanana rano mafana afovoany
Ny loharanon'ny rivotra mafana solarshine dia tsy vitan'ny miantoka ny kalitaon'ny vokatra tsara, fa mitahiry vola be ho an'ny mpampiasa ihany koa. 12HP Commercial Heat Pump Unit dia natao ho an'ny rafitra afovoan'ny rano mafana.
15 HP Unit Air Pump Source Source Pump an'ny hafanana an'ny rafitra hafanana eo afovoan'ny rano
Solarshine 3HP ka hatramin'ny 30HP (ampidiro ny 15HP) loharanom-pahavitrihana loharano mafana mahatafana rano mamakivaky ny fatiantoka ny rafi-panafana rano mafana mahazatra, afaka mamorona fiainana rano mafana ahazoana aina ho an'ireo mpampiasa!
Fitaovana paompy hafanana 20 HP Commercial Air Source
Solarshine 18000BTU 20HP loharanom-baovao azo avy amin'ny rivotra mafana paompy hafanana no manome anao fahafaha-manao tsy voafetra amin'ny fampiasana rano mafana，izany dia mety amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe, trano fisakafoanana, hopitaly, salon fanaovana hatsaran-tarehy, lamba fanasan-damba, foibe fandroana, trano fandraisam-bahiny, ary fandroana tongotra sns.
25 Varotra an-tseranana HP mankany amin'ny paompy hafanana rano ho an'ny rafitra fanamafisana ny rano mafana
Andian-tsarimihetsika Solarshine 3HP ka hatramin'ny 30HP (ampidiro ny 25HP) loharanom-pahalalana azo avy amin'ny rivotra mafana mamakivaky ny fatiantoka ny rafi-panafana rano mafana mahazatra, afaka mamorona fiainana rano mafana ahazoana aina ho an'ireo mpampiasa!
12 Manaraka> >> Pejy 1/2
Momba ny orinasa
SolarShine dia misahana manokana amin'ny famokarana heater-drano amin'ny masoandro hatramin'ny 2008, lasa iray amin'ireo mpamokatra solika mpamokatra hafanana sy hafanana amin'ny masoandro any Shina.
Tranga farany niseho
Inona no maha samy hafa ny paompy hafanana amin'ny rivotra, loharano hafanana amin'ny loharano?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-10-05
Adiresy: Faritra indostrialy SolarShine, isa 61, Longxin, Distrikan'i Pingshan, Shenzhen, Sina
8: 30-18: 00